Encebọchị Mwere Onwe (site na Billy Mays, ShamWow na HeadOn) | Martech Zone
Igwe onyonyo na-abụkarị n'ụlọ anyị, mana ọ na-abụkarị mkpọtụ ụda. Ọ bụrụ na m na-ekiri telivishọn, ọ na-abụkarị Channel Discovery. Taa bụ ụbọchị izu ụka, yabụ ejiri m ọwa m mee ihe ugboro ole na ole. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, anyị gbazitere otu ihe nkiri. Lee ihe atọ kpatara:
Enwere m olile anya na onye a na-agba ume n'ihi na mmadu kpuru ya anya.
Edebere onwe gị mgbe ị hụrụ azụmahịa ha 47 ugboro.
Naanị ihe nwoke a kwesịrị ire bụ ntutu na afụ ọnụ.
Mgbasa mgbasa ozi jọgburu onwe ya bụ ịmegharị, ọ bụghị ịzụ ahịa. Amaghị m ihe na-echegbu m ọzọ - mkpọsa ahịa ndị a ma ọ bụ eziokwu na ha ga na-arụ ọrụ.
Tags: ndebanye ahanjikọneo mammalian nkankwado vidiyowordpress ịzụ ahịa ụgbọ
Vidio m nke 4 Julaị
Jul 5, 2008 na 10: 18 AM
Akpọrọ m Isi Na azụmahịa, ma ihe ndị ahụ na-arụ ọrụ. Oge obula m nwere ezigbo isi ọwụwa, aga m eji ya na enweghị isi ọwụwa ọzọ!